eyelashes langa and amashiya - iphupho kwanoma iyiphi ummeleli we nengxenye enhle lwesintu. Kodwa, kuningi becasukile amanye amantombazane nabesifazane, nemvelo wayengakwazi abavuze kulombukiso. Ngakho-ke, abesifazane abaningi baphendukela amaqhinga ahlukahlukene ukugqamisa ubuhle. Nokho, izimonyo ngokuvamile uyakwazi ukunikeza umphumela zesikhashana kuphela, futhi ngezinye izikhathi ngisho ungenza kube ukulimala okukhulu. Ngakho-ke kuyinto evamile ukuba abantu ukubuza imibuzo mayelana nendlela usengayenza eyelashes eside, ngaphandle kokudala umonakalo omkhulu kakhulu. Phendula kubo lula ngempela, ngoba ukudala lesi simangaliso uyakwazi uwoyela burdock. Ukuze eyelashes namashiya, kuyindlela engcono yokuthola ubuhle kanye kwabantu.
Kuyini ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo? Kuyingqayizivele ngokwako ngezithako zawo. Iqukethe enjalo izinto eziwusizo ezifana zinc, i-silicon inulin, ezihlukahlukene amavithamini namaminerali nokuningi. Ngalezi izingxenye, kuyasiza kakhulu amashiya burdock. Kungaba ukubuyisela isakhiwo izinwele, futhi lapho kusetshenziswe njalo, ebenza nokunwebeka.
Lo mkhiqizo wemvelo ivame ukusheshisa ukukhula eyelashes namashiya, futhi amanye amantombazane ukuthi ngemva kokuba ayoba mnyama kakhulu futhi sithole ayebuthaka.
izakhiwo awusizo kawoyela
Ngenxa ngezithako zawo ezimangalisayo, uwoyela kungaba nethonya elikhulu sezinwele. Mhlawumbe noyedwa imikhiqizo eqolo yezimonyo akakwazi ukunika miphumela.
Into wukuthi kuba nemiyo organic lisuselwa impande burdock kungaba ukunamathisela ishq izinwele. Ngakho-ke, abenze okuhlala isikhathi eside futhi akavumeli ukuba baphule. izingxenye awusizo equkethwe kulo mkhiqizo wemvelo, kahle bazogcwalisa izimpande, okuyinto enhle kakhulu amashiya. uwoyela Burdock kungasiza ukuqinisekisa ukuthi esikhundleni izinwele iwe ukuthi aphume, sikhule eside unempilo.
Ngaphezu kwalokho, asetshenziselwa nokuvulwa curls, futhi ungaba nethonya ezuzisayo futhi esikhumbeni azungeze amehlo, uqinisa ke, kanjalo uvimbele ukudala ezinye ukuvela imibimbi.
Thenga noma uzenze?
Burdock uwoyela ishiya ukukhula kungenziwa ngemali ekhemisi, upheke ekhaya. Ngayinye yalezi zindlela kunezinzuzo. Ngokwesibonelo, uma umkhiqizo yezimonyo ukuthenga ngefomu kakade kuqedile, kungenzeka wokuqeda ngokwakho yazo zonke kokuhlupheka womshini yabo.
Kodwa uma uthando sizalwa nawo bonke yemvelo futhi ufuna qiniseka ukuthi lokhu kusho khona izinto ezikhiqizwa indlela yemvelo kuphela, ungakwazi ulungiselele amashiya burdock, ngaphandle kokushiya ekhaya.
Ukuze wenze lokhu kuzothatha ezintathu wezipuni izimpande omisiwe izitshalo ewusizo, bese ukubabulala kahle. Ngemva kwalokho, lo powder kwaphumela kumele egcwele ingilazi lamafutha yemvelo iminqumo. Ingxube kwaphumela kumele bavunyelwe ukuba ume izinsuku esikhundleni abanye ebumnyameni, futhi ke wagqoka umlilo, kanye kuziwa ngamathumba, upheke elinye imizuzu eyishumi nanhlanu. Ukusebenzisa etholwe uwoyela burdock ungenza okuningi izimali ukukhula amashiya kanye eyelashes.
Abanye besifazane abangamaRom babesizakala belulekwa ukuba uthole imiphumela emihle kakhulu nxa usebenzisa lokhu kuyindlela engokwemvelo engeza Vitamin A kokuyithenga ekhemisi noma kokuba ekhishwe edayisa imifino. Ngokwesibonelo, ungakwazi basihlikihle on a grater obuncane elincane isanqante, bese ngawakhamela out ijusi. Ngemva kwalokho, uhlanganise wonke izithako ngezabelo alinganayo.
Uma uwa izinwele okuningi, kungcono ukwenza amafutha burdock nopelepele ngoba amashiya kanye eyelashes. Le nhlanganisela ngokumangalisayo izingxenye kubhekwa indlela engcono kuleli cala. Ngekusetjentiswa yansuku zonke ngalezi zithako ngokuhamba kwesikhathi kungabonakala ukukhula yashesha of izinwele. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi uma usebenzisa lokhu remedy abantu kudingeka uqaphe kakhulu ukugwema ukuthintana ngamehlo.
Omunye iresiphi omuhle, ikakhulukazi amashiya kanzima futhi aphumele ngaphandle, nguye lapho burdock okuxubile namafutha, noma ngisho kungenzeka ukuthatha peach kanye ulwandle lalesi sihlahla.
Njengoba kahle kukhuthaza ukukhula isakhiwo izinwele, esakhiwa ezintathu amathonsi imikhiqizo yemvelo ethathwe impande zalesi sitshalo, futhi njengoba rum kakhulu noma brandy.
Ngaphambi amashiya smear burdock, kufanele sekuqala ukufudumala ngendlela okugeza amanzi. Khona-ke, i-pad ukotini usike imivimbo amancane cwilisa them ngaphakathi lo mkhiqizo ke onikezwe izinwele. Ukuze ugweme ekusakazekeni uwoyela eminye hit Esibheka emehlweni, kubalulekile ukubeka phezu napkin nokuningi ukuvikela ingcina ukwakhiwa okunjalo.
Isikhathi salesi kunemidanti imizuzu okungenani ayishumi nanhlanu, ngaphandle akukho ukungakhululeki, ungakwazi sandise futhi kuze kufinyelele amabili.
Kuze kuphele isikhathi ukuphathwa uzodinga uyeke amashiya abahluthula, futhi ezihlukahlukene izinqubo staining ikhemikhali nakanjani wenze ngeke kube lula kangaka. Kodwa uma ulinde kancane, umphumela uyoba ekhexisayo.
Uyini umthelela olulindelekile?
Njenganoma iyiphi izinto eziphilayo, kuyashesha izinwele ukukhula, burdock abuzange ngokuphazima kweso. Ukuze ubone izinguquko ezinhle kuyodingeka ukuba okungenani ilinde amasonto ambalwa, futhi lokhu uma isetshenziswa njalo. Kubalulekile ucabangela iqiniso lokuthi sibi isimo amashiya, kulapho Kuzothatha ezungeze bakwazi ukuqaphela imiphumela.
Kodwa lapho uwoyela iqala ukusebenza, umphumela siyamangalisa. Izinwele waqina, mkhulu futhi mnyama.
Lo mkhiqizo engokwemvelo burdock impande cishe bangakwazi ukwenza okubi okuningi, kungaba yingozi kuphela uma kwenzeka uma kukhona isici esiyingqayizivele. Kungaba lula kakhulu ukuhlola - udinga ukuba ngaphambi kokufaka isicelo ukuhlolwa encane.
Ukuze wenze lokhu, sisebenzise amafutha kancane phezu kwesikhumba esihlakaleni, njengoba lokhu lapho iningi ithenda, bese ulinda amahora ambalwa. Uma ngemva kwalokho kuzoba ububomvu noma ukuqubuka, yilona thuluzi ngoba amashiya kungcono hhayi ukuyisebenzisa. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi yokungezwani komzimba ingalo awavelanga, kodwa endaweni iso lapho esebenzisa amafutha ukulunywa iqala. Ingase futhi kubhekwe ukusabela okungekuhle umkhiqizo organic.
Muva nje, abantu kabanzi uwoyela burdock ngoba amashiya. Amazwana ngakho zahlukahlukene kakhulu, kodwa iningi lawo omuhle. It akaphinda wamsiza kuphela kulabo azikwazanga ukulinda ngezenzo zakhe. Kodwa labo baqonde ukuthi amakhambi bendabuko zihlukaniswa yokuthi ayinawo imiphumela esheshayo, weneliseka le ndlela yokwelapha. Futhi ake inqubo yokutakula lide kakhulu, kodwa, ngokombono wabo, kusenzima ungcono kunendoda unomphela Umbala amashiya noma ukhophe.
Futhi, lo mkhiqizo organic lisuselwa impande isitshalo ewusizo ezifana, isetshenziswa amantombazane amaningi ngesikhathi entwasahlobo ka beriberi njengendlela yokwelapha nezinwele futhi zenze ngcono isimo sabo.
Yiqiniso, uwoyela ishiya burdock - lesi isixazululo esingcono kakhulu ukugqugquzela ukukhula kwabo. Ngemva kwakhe, baba mkhulu hhayi kuphela kakhulu futhi mnyama kodwa engakwazi kodwa jabulani.
Zinc pyrithione kuyadingeka ekwelapheni izifo zesikhumba
"Umtholampilo" (ukhilimu): ukubuyekezwa, izincazelo, izinhlobo, ukubunjwa, izici kanye nokubuyekeza isicelo
Elimnandi nemnene okugeza Foam
Isiqedaphunga "Garnier NEO": ukubuyekezwa odokotela, ukubunjwa, isithombe
Inqubomgomo utshalomali inkampani kanye isimo
Electrode kubhayela "Galan": ukubuyekezwa kanye Ukufakwa
Uyini wamaphaphu CT?
Umbuzo zefilosofi kwezibalo: bangaki amazwe isimo uthi ezimele?
I-Gazprombank: mboleko yomthengi ngaphandle kokuhlupheka okuningi